Radio Don Bosco - Nandao ny haratony izy ireo...
Ry kristianina havana, isaky ny 30 novambra ny Fiangonana dia mankalaza an’i Md André Apôstôly. Ventesintsika ao amin’ny fiekem-pinoana moa hoe Apôstôlika ny Fiangonana, satria ireo no vavolombelona niara-niaina tamin’i Jesoa Kristy, nandray ny fampianarany, vatofototra nanorenana ny Fiangonana. Misy fiainana tsy voasoratra ao amin’ny Baiboly aza fa tamin’ny Apôstôly no nahazoana azy : lovam-panahy.
Teo am-panaratoana no niantsoan’i Jesoa an’i André sy ireo Apôstôly voalohany ; ny dikany dia hoe eo am-perinasa, eo amin’ny fiainana andavanandro no ihaonana amin’Andriamanitra. Io raharaha fanao io no asandratra ho an’Andriamanitra.
Ireo mpampianatra Jody, niantso mpianatra hianatra lalàna, fa ny mpianatr’i Jesoa koa hianatra an’Izy Jesoa Kristy, hiaina ny fiainany. Nanaraka avy hatrany an’i Jesoa izy ireo vantany vao naheno hoe avia hanaraka Ahy, nilaozany ny haratony sy ny rainy. Izay fandaozana izay, isan’ny fepetra lehibe hanarahana an’i Jesoa, eny fa na dia izay tia indrindra aza, hatramin’ny aina aza. Mankeo amin’izy Jesoa aloha, avy eo irahiny hitory izay inoana. Antso sy iraka ny fiainana, na ilay Eglizy na ho an’ny kristianina tsirairay. Hahatoky amin’izany anie isika.